सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको हकप्रद भर्ने आज अन्तिम दिन, फारम भर्न कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको हकप्रद भर्ने आज अन्तिम दिन, फारम भर्न कहाँ जाने ?
काठमाडौं - सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको १९.२३% हकप्रद भर्ने आज अन्तिम दिन हो । सिद्धार्थले ५.२ः१ अनुपातमा ८ लाख ६२ हजार १२५ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । यसमा लक्ष्मी क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गरेको छ । लक्ष्मी क्यापिटल नयाँ वानेश्वर तथा लक्ष्मी बैंकको उपत्यका भित्र महाराजगन्ज र पुल्चोक शाखाबाट यसमा आवेदन दिन पाइनेछ । यसैगरी, लक्ष्मी बैंकको उपत्यका बाहिरका अधिकांश शाखा कार्यालयबाट पनि सेयर भर्न पाउने व्यवस्था छ । मंगलबार प्रभु इन्सुरेन्सको १०६५ रुपैयाँ क्लोजिङ भाउ छ ।
सिद्धार्थको हकप्रदमा वैशाख १६ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन् । हाल यस इन्सुरेन्सको चुक्ता पुँजी ४४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । हकप्रद बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी ५३ करोड ४५ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सिद्धार्थले १४ करोड ६० हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी ३१ रुपैयाँ २४ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २१८ रुपैयाँ १७ पैसा छ ।